အန်ဖီးကွင်းတွင် ရပ်ရှ်ဖို့ဒ်ဆိုင်းဘုတ် ထောင်သင့်/မထောင်သင့် လီဗာပူးပရိသတ်များ ဆွေးနွေးနေ – Play Maker Sports Journal
အန်ဖီးကွင်းတွင် ရပ်ရှ်ဖို့ဒ်ဆိုင်းဘုတ် ထောင်သင့်/မထောင်သင့် လီဗာပူးပရိသတ်များ ဆွေးနွေးနေ
လီဗာပူးပရီသတ်များဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်ကစားရမယ့်ပွဲအန်ဖီးလ်ပွဲစဉ်တွင် အန်ဖီးလ်ကွင်းတွင်မားကပ်စ်ရပ်ရှ်ဖို့ဒ်နဖူးစည်းအား ထောင်ထားသင့်/မသင့်ငြင်းခုန်လျက်ရှိကြပါတယ်။
လီဗာပူးပရိသတ်အများစုကကိုဗစ်ကာလအတွင်းတွင်ဗြိတိန်တလွှားမှနွမ်းပါးတဲ့ကလေးငယ်များအားအဟာရပြည့် အစားအစာများအခမဲ့စားသောက်ခွင့်ရရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်သလိုအစိုးရကိုလည်းဖိအားပေးလုပ်‌ ဆောင်ခဲ့တဲ့မားကပ်စ်ရပ်ရှ်ဖို့ဒ်အားဂုဏ်ပြုတဲ့အနေဖြင့်နဖူးစည်းတစ်ခုကပ်ထားရန်ဆွေးနွေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးပရိသတ်တစ်ဦးက “ဆာလောင်မှုမှာအသားအရောင်ခွဲခြားတာမရှိဘူး။ကျေးဇူးဘဲ မားကပ်စ်ရေ”လို့ ရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားလီဗာပူးပရိသတ်တစ်ဦးကမူ “သူလုပ်ခဲ့တာတွေအရမ်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့် အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာယူနိုက်တက်ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော် ဘောလုံးပွဲကြည့်တဲ့ရပ်တဲ့နေ့ပဲ”လို့ဆိုသွားပါတယ်။
Play Maker ဂျာနယ်ပရိသတ်တွေကတော့ ရပ်ရှ်ဖို့ဒ်ရဲ့ကွင်းပြင်ပ ပရဟိတလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ဂုဏ်ပြုသင့်တယ်ထင်သလား။မန်ယူ-လီဗာပူးပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်ဒီလိုလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်လား?
အန္ဖီးကြင္းတြင္ ရပ္ရွ္ဖို႔ဒ္ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္သင့္/မေထာင္သင့္ လီဗာပူးပရိသတ္မ်ား ေဆြးေႏြးေန
လီဗာပူးပရီသတ္မ်ားဟာလာမယ့္တနဂၤေႏြေန႔တြင္မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ႏွင့္ကစားရမယ့္ပြဲအန္ဖီးလ္ပြဲစဥ္တြင္ အန္ဖီးလ္ကြင္းတြင္မားကပ္စ္ရပ္ရွ္ဖို႔ဒ္နဖူးစည္းအား ေထာင္ထားသင့္/မသင့္ျငင္းခုန္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။
လီဗာပူးပရိသတ္အမ်ားစုကကိုဗစ္ကာလအတြင္းတြင္ၿဗိတိန္တလႊားမွႏြမ္းပါးတဲ့ကေလးငယ္မ်ားအားအဟာရျပည့္ အစားအစာမ်ားအခမဲ့စားေသာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္သလိုအစိုးရကိုလည္းဖိအားေပးလုပ္‌ ေဆာင္ခဲ့တဲ့မားကပ္စ္ရပ္ရွ္ဖို႔ဒ္အားဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနျဖင့္နဖူးစည္းတစ္ခုကပ္ထားရန္ေဆြးေႏြးေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လီဗာပူးပရိသတ္တစ္ဦးက “ဆာေလာင္မႈမွာအသားအေရာင္ခြဲျခားတာမရွိဘူး။ေက်းဇူးဘဲ မားကပ္စ္ေရ”လို႔ ေရးသားသြားခဲ့ပါတယ္။အျခားလီဗာပူးပရိသတ္တစ္ဦးကမူ “သူလုပ္ခဲ့တာေတြအရမ္းေကာင္းပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အန္ဖီးလ္ကြင္းမွာယူႏိုက္တက္ကစားသမားတစ္ဦးရဲ႕ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန႔ကေတာ့ကြၽန္ေတာ္ ေဘာလုံးပြဲၾကည့္တဲ့ရပ္တဲ့ေန႔ပဲ”လို႔ဆိုသြားပါတယ္။
Play Maker ဂ်ာနယ္ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ရပ္ရွ္ဖို႔ဒ္ရဲ႕ကြင္းျပင္ပ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အန္ဖီးလ္ကြင္းမွာ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ဂုဏ္ျပဳသင့္တယ္ထင္သလား။မန္ယူ-လီဗာပူးၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ဒီလိုလုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ထင္လား?
မန်ယူကို စွန့်ခွာဖို့ သေချာသွားပြီဖြစ်တဲ့ ပါရမီရှင်နောက်ခံလူ
ဗီလာလေ့ကျင့်ရေးကွင်းပိတ်ထားရဆဲဖြစ်၍ ဗီလာ-အဲဗာတန်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းရဖွယ်ရှိ